Budata Opera maka Windows
Free Budata maka Windows (70.40 MB)
Opera bụ ihe nchọgharị weebụ ọzọ nke na-achọ ịnye ndị ọrụ ahụmịhe ịntanetị kachasị ọsọ na kachasị elu ya na injin ya ọhụrụ, njikwa ọrụ na njirimara.
Iwusi akụrụngwa ya na Chromium na Blink iji jigide ọnọdụ ya netiti ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu, Opera nwere atụmatụ nwere ike ịgbagha Chrome, Firefox na Internet Explorer na ahịa ihe nchọgharị.
Mgbe ị wụnye ma rụọ Opera na kọmputa gị maka oge mbụ, ị nwere ike ịhụ mgbanwe ahụ ozugbo, na atụmatụ ọhụrụ na-echere anyị ozugbo ị mepere ihe nchọgharị anyị. Emepụtara taabụ 3 dị iche iche ngwa ngwa, Dashboard na Discover iji melite ahụmịhe ịntanetị nke ndị ọrụ.
Site na Ndenye Nweta Ntanetị, anyị nwere ike idozi weebụsaịtị ndị anyị na-eleta ugboro ugboro dịka ọchịchọ nke aka anyị, ma nweta weebụsaịtị ndị a na-eji otu pịa mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
Nihi taabụ ọzọ a na-akpọ Dashboard, anyị nwere ike ịnweta weebụsaịtị anyị masịrị, ịnụ ụtọ ma ọ bụ chọọ ịchọgharị ọzọ ma emechaa, ma nweta ha mgbe ọ bụla anyị chọrọ nokpuru ngalaba a.
Nikpeazụ, ekele maka Explore, taabụ ọzọ nke zutere ndị ọrụ noge na-adịbeghị anya, anyị nwere ike ịnweta akụkọ kachasị ọhụrụ nke weebụsaịtị ndị ewu ewu na gburugburu ụwa bipụtara nokpuru edemede dị iche iche anyị nwere ike iyo. Ohere inyocha ma site na otu na mba na-awa ka ọrụ ugbu a.
Ihe omuma ohuru ozo bu na site na ịbanye na akaụntụ Opera gị, anyị ga-enwe ike ịmekọrịta ma na desktọọpụ na nsụgharị mobile. Nụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịga nihu na ọrụ anyị na-arụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị noge njem ahụ, site na ebe anyị kwụsịrị mgbe anyị rutere kọmputa.
Ewezuga atụmatụ ọhụrụ ndị a niile, Opera, nke nwere nkwado isiokwu, nkwado nkwụnye na njirimara niile mara mma na ihe nchọgharị ndị ọzọ, ọ dị ka o buliela mmanya ahụ ntakịrị.
Na mgbakwunye, ekele maka ọnọdụ Turbo ya, Opera, nke na - eme ka nyocha ịntanetị gị dị ngwa, dịkwa oke nlezianya gbasara nhazi na ebe nchekwa.
dị nnọọ ngwa ngwa
Nkwado mgbakwunye dị ala
Nha faịlụ: 70.40 MB
Mmepụta: Opera Software